Gal-dacwadeed laga furayo mas'uuliyiinta eheladooda ku jiraan Al-Shabaab
Gal-dacwadeed laga furayo mas'uuliyiinta eheladooda jiraan Al-Shabaab
MUQDISHO, Soomaaliya – Maxkamadda Ciidamadda dalka Soomaaliya ayaa waxay amar ku bixisay in la furo gal-dacwadeed ka dhan ah cid kasta oo ku jirta diiwaanka dowladnimo ee eheladooda ay kamid yihiin argagixisadda.
Gudoomiyaha xeer-beegtadda oo carabka ku dhuftay in dadkaas ay kamid yihiin mas'uuliyiinta, saraakiisha iyo shaqaalaha dowladda ayaa faray hay'addaha ku shaqada leh in ay si deg-deg ah u bilaabaan shaqadaas.
Sidda laga soo xigtay Xasan Cali Nuur Shuute, ujeedada laga leeyahay talaabadaan ayaa la xiriirta in lagu xoojiyo howlgalada amni sugida.
"Amniga wuxuu sugmaa marka xogta iyo howlgalka mideysan yihiin," ayuu u sheegay howlwadeeno ka tirsan Hay'adda Dambi baarista Booliska ee CIA-da oo kulan su'aallo waydiin ah uu kula qaatay Muqdisho.
Kulankaan ayaa yimid markii habac-sanaan iyo wadashaqeyn la'aan ay kasoo dhex-ifbaxday Maxkamada Ciidanka iyo dambi-baarista.
"Waxyaabaha aan rabno in baarista ay qabato waxaa kamid ah dadka; saraakiil, mas'uul ama shaqaale dowladeed oo ehelkiisa argagixisadu jiraan, waa in gal-dacwadeed loo furaa oo su'allo la waydiiyaa, hadii ay cadaato oo uu ogaa oo uusan soo gudbinna dacwad ciqaabaa lagu soo oogaa si talaabo looga qaado," ayuu hadalkiisa ku daray Xasan Cali Nuur [Shuute].
Kooxaha argagixisada ee ka howlgala Soomaaliya waa Al-Shabaab iyo Daacish, oo si dhuumaaleysi ah dhaqdhaqaaq uga sameysa Puntland.
Hadalka gudoomiye Shuute, oo aabihiis ay horey u dileen ururka Al-Shabaab, ayaa kusoo hagaagaya xilli uu sii kordhayo walaaca la xiriira ku-dhex-milanka hay'addaha dowladda ee xoogaga hubeysan.
Warbixino amniga ayaa soo jeedinaya in xafiisyadda madaxda sarre la dhimay shaqaalaha caadiga ah, sabab la xiriirta baqdin amni. Intaas waxaa wehlisa in hogaanka uu munaasabado uga baaqdey digniino ammaan.
Inkasta oo qaraxyadii waaweynaa ay ka yaaraadeen caasimadda, haddana dilalka qorsheysan iyo hoobiyeyaasha lagu beegsado ayaa noqdey tus-bax afka furtay, sidda uu shaaciyey machadka daraasaadka amniga Hiraal.
Sidda ku xusan warbixinta uu machadka soo saarey 6-dii bishaan July taasoo nuqul kamid ah uu arkay Garowe Online, kala barka sanadkan 2020-ka, Al-Shabaab ayaa fulisay 384 weeraro, halka kala barkii sanadkii 2019 ay qaadey 433.
Dil ka dhacay Muqdisho iyo falalka khaarijinta oo soo kordhaya
Soomaliya 04.06.2018. 11:24
Tan iyo markii Ramadan-ka uu billowday, falalka dilalka ayaa kusoo kodrhaya Caasimadda...
"Qaraxii Ex-kontarool waxaa lagu sameeyay canshuurta Muqdisho"
Soomaliya 28.12.2019. 20:17
Taliye lagu eedeeyay shirqool dil oo ka dhacay caasimada Soomaaliya
Soomaliya 26.12.2019. 13:01
CC Shakuur oo DF Soomaaliya ku eedeeyay dhiirragelinta argagixisadda
Soomaliya 05.12.2019. 08:49
Agaasimaha hay'adda socdaalka Soomaaliya oo qarax ka badbaadey
Soomaliya 20.10.2020. 20:55
Soomaali lagu helay maalgelinta Al-Shabaab oo lasoo musaafuriyey
Soomaliya 19.09.2020. 20:05